600 1 000 1500 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 watt Pure Manual Sine Wave Inverter Charger Umnini kaThixo - Sigineer Power
Home / Blog / 600 1 000 1500 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 watt Pure Manual Sine Wave Inverter Charger Umnini kaThixo
Yongeza: iBld A, i-Jiali Industrial Zone, Yuanfen Rd, Longhua, Shenzhen, 518100, eChina
1. Ulwazi loKhuseleko olubalulekileyo
Gcina Le ncwadi! Funda le ncwadi ngaphambi kokufakwa, iqulethe ukhuseleko olubalulekileyo,Ukufakwa Kunye nemiyalelo yokusebenza. Yigcine kwindawo ukulungiselela ukuba isetyenziswe kwixesha elizayo ekhuselekileyo.
Yonke inamba kufuneka ilandele i-National Code Code, i-Provincial okanye enye iikhowudiEsebenzayo ngexesha lokufakwa, kungakhathaliseki ukuba iziphakamiso kule nto Ncwadana.Zonke iintambo kufuneka zibe ngabaqhubi beethusi.
1. 1 Ukhuseleko oluqhelekileyo
1. 1. 1 Musa ukutyhila i-Inverter ukuze imvula, iqhwa, i-spray, i-bilge okanye uthuli. Ukunciphisa umngcipheko wengozi, ungagubungeli okanye ungavimbela ukungena Zivulo. Ungafaki i-Inverter kwindawo yokucima Kwigumbi. Ukugqithisa kungabangela. Vumela okungenani i-30CM yokukhupha kwi-inverter yokuhamba komoya. Qinisekisa ukuba umoya unako ukujikeleza ngokukhululekile malunga neyunithi. Kufuneka ukuhamba kwe-145CFM yomoya.
1. 1. 2 Ukuphepha umngcipheko womlilo kunye nokutshatyalaliswa kwekhompyutha, qinisekisa ukuba ukhona I-wiring isesimweni sombane esilungileyo kwaye i-wire ayikho Ngaphantsi. Musa ukusebenzisa i-Inverster nge-wiring ewonakalisiweyo okanye engekhoyo.
1.1. Izixhobo ziqulethe izinto ezinokuvelisa i-arcs kunye / okanye Intla. Ukukhusela umlilo kunye / okanye ukutshabalalisa ungafaki kumaziko Equkethe ibhetri okanye izinto ezinokutsha okanye kwindawo Zifuna izixhobo ezikhuselekile. Oku kuquka nayiphi na indawo Oomatshini abasebenzisa ipetroli, amathangi okufuya, okanye amajoyini, Okanye olunye uxhumano phakathi kwamacandelo enkqubo yombane.
Jonga iWarranty ngemiyalelo yokufumana inkonzo.
1. 1. 4 Musa ibattery le Inverter / Charger. Iqukethe akukho msebenzisi onokwenziwa Nxalenye. Ukuzama ukukhonza i-Inverter / Umshaja ngokwakho kunokubangela ukutshatyalaliswa kombane okanye umlilo. Ama-capacitor angaphakathi ahlala esetyala emva koko Amandla anqanyuliweyo.
1. 1. 5 Ukunciphisa ubungozi yabanjwa ugesi, aqhawule zombini AC and DC namandla Ukusuka kwi-Inverter / Ishaja phambi kokuba uzame nasiphi na isondlo okanye Yokucoca. Ukuguqula ukulawula akuyi kunciphisa lo mngcipheko
UKUSEBENZA: Umonakalo wezoxhobo
Icandelo lempembelelo yocingo le-AC ye-inverter akufuneki lidibaniswe noluntu Amandla okanye i-generator. Le meko ibubi kakhulu kuneesekethe ezimfutshane. Ukuba iyunithi iyasinda Le meko, iya kuvala de kube kwenziwe izilungiso.
Ukufakela kufuneka kuqinisekiswe ukuba umbane we-AC inverter ayikho nxu lumene kwi-AC Negalelo.
Isilumkiso: Imida yokuSebenzisa
OKUQHELEKILEYO, QAPHELA UKUBA INVERTER / INKQUBO ANGAKHONA UKUSEBENZISWA NGOKUXHUMANA IZINKQUBO ZENKXASO YOMSEBENZI OKANYE OKUNYE IZINTO ZEMPILO KANYE NEZITHILI SENZA IWARANTI OKANYE UKUMELWA MALUNGA NEEMVELISO ZABO UKUSETYENZISWA OKUNJALO. UKUSEBENZISA I-INVERSTER / IJAJA NGALE NTO ISIXHOBO ESITHILE SISENGOZINI YAKHO.
1. 2 Ukuqapha xa usebenzisa iiBhetri
1. 2. 1 Ukuba i-aseli yebhanki idibanisa ulusu okanye izambatho, hlamba ngokukhawuleza ngeesepha Kunye namanzi. Ukuba i-asidi ingena kwijiso, ngokukhawuleza ikhupha iliso ngokusebenza Amanzi abandayo kwaye athole unyango Ngokukhawuleza.
1. 2. 2 Ungaze utshaye okanye uvumele u-spark okanye ilangabi kwindawo ebhetri okanye Injini.
1. 2. 3 Musa ukulahla ithuluzi lesinyithi kwibhetri. I-spark eyiphumela okanye Ukufutshane kwesekethe kwibhetri kunokubangela Ukuqhuma.
1. 2. 4 Susa izinto zetsimbi ezifana nezindandatho, amabhonkco, iintambo, Kwaye ulindile xa usebenza nebhetri ekhokelayo-acid. Ibhetri ye-acid-lead ivelisa i-short circuit-current current high Ukutshiza isandi okanye izinto ezinjengezinyithi, obangela ukutshisa okukhulu.
1. 2. 5 Ukunciphisa ubungozi yokwenzakala, ubaqononondise kuphela nzulu-cycle elikhokelayo acid, ukukhokela kwistibhiya, Khokela i-calcium cell cell, i-mat, okanye i-NiCad / NiFe yohlobo oluthathekayo Iibhetri. Ezinye iintlobo zeetribhethi ziya kutshabalalisa, zenze ukulimala komntu kunye Umonakalo.
T 1.2.6 Don ‘ufake inverter kufuphi neebhetri, lo inverter unakho ukufudumeza electrolyte ebhetri kwaye ibangele umphunga onakalisayo ukukhuphela kunye umonakalo / ezinokudla elektroniki ezikufutshane okanye isinyithi.
2. 1 Inkcazelo ngokuthe gabalala
Amandla eSigineer Naliphi amandla uMidibi Pure Sine Wave Inverter / Charger ludibaniso i inverter, itshaja ibhetri kunye AC auto-transfer tshintshela kwinkqubo enye epheleleyo kunye kwincopho DC kwi AC ukuguqulwa ngobuchule 88%.
Ipapashwe ngokukhethekileyo iimpawu i d ngayo yenye inverter / iitshaja ethandwa kwaye afikelelekayo kwimarike namhlanje.
Iquka amandla okulungiswa kwindlela echanekileyo, ukuhlawula isiteji esininzi Kunye ne-pure wave sine wave output Ukukwazi ukufikelela kwiimfuno ezinamandla ezingenakuze zize zihlangabezane nezidingo zokufuna amandla amandla okuthintela ngaphandle Ebeka ingozi kwizixhobo.
Isitya sebhethri esinamandla Oku Nayiphi Power Combi Inverter / Charger uya kutsho kuma-105 Amps (luyayongeza kwimodels ezahlukeneyo), nangamandla factor izakulungiswa, isebenzisa amandla 20-30% ngaphantsi ukusuka AC igalelo ngaphezu kwitshaja eqhelekileyo,uphambuke ezintethweni inkathazo iihambo yombane okanye nomthwalo generator.
Umthamo ogqithiseleyo 30 0% kwemveliso rhoqo imizuzwana ukuya ku-20 ukuxhasa ngokuthembekileyo izixhobo kunye nezixhobo elide.
Ukusetyenziswa bengasebenzi kumgca iphantsi, nama-4% bamandla ayo rated.
Ezi zinto ezikhethekileyo zenza lo mgca ukuncintisana kakuhle kunye nabadlali bawo obuphezulu.
T yena imifuziselo ziyafumaneka 120Vac (kwisigaba esinye), 230Vac (isigaba single) kunye 120 / 240Vac (isigaba split), kunye oluzenzekelayo 50Hz / 60Hz frequency switch, umgca imveliso ayikho ehambelana nayo yonke imigangatho eluncedo ezinkulu ehlabathini lonke.
Le line ibandakanya ezinye kuphela 4 000 imifuziselo watt 12Vdc ukuba abasebenzisi isithuthi ukuba amandla imithwalo zokuba kwibhanki battery 12VDC ngaphandle ngokutsha zebhanki zabo kwebhetri.
I-AC / Ibhetri kuqala nokucima kunye auto generator uqala ukusebenza kwenza kube kuhle ezifanelekileyo ukusebenza mhlawumbi ngamandla elilalela okanye izicelo zamandla ombane.
Kwindlela kuqala AC, w hen AC ewisa ugesi s off (okanye liphuma elamkelekileyo), i-relay transfer yi de-amandla kunye Umthwalo uhanjiswa ngokuzenzekelayo kwimveliso ye-Inverter. Xa amandla AC abafanelekayo Libuyiselwe, ulayini uphumelela kwaye umthwalo ngokuzenzekelayoIxhunyiwe kwi-AC.
Xa elicwangcisiweyo Ibhetri Priority M ode nge uneswitshi DIP, le inverter uya luthathe amandla eliphezulu kwimithombo amandla angaphandle kwiinkqubo eneji ehlaziyekayo kunye nomjikelo amancinane ibhetri kuya kufunwa. Xa ukufumaneka auto wenkunkuma ukuqala, wokuphehlaumbane nga zinokuqukwa kwinkqubo nje emva phezulu waza waqalisa xa ombane ibhetri iya aphantsi.
Nge Ayanda oluvakalayo kunye L E D ukubonisa ekude, lo inverter inika abasebenzisi ulwazi olunzulu imo yokusebenza, yenzela lula ukuba ulondolozo kunye imibuzo.
Ngaloo ndlela Sigineer Power APC Series Pure Sine Wave Inverter / Charger ilungele kwiinkonzo ezininzi izicelo kuquka iinkqubo kumandla ombane, into eluncedo, iilori, RV kunye izithuthi mergency e njl.
Ukuze ufumane okuninzi kwe inverter amandla, kufuneka kufakelwe, kusetyenziswa yaye zilondolozwa ngokufanelekileyo. Nceda ufunde imiyalelo kule ncwadana ngaphambi kokufaka kunye Sebenza.
Izixhobo zamandla-iisetyhula, iibhondi, abagayi, i-sanders, i-buffers, ukhula kunye I-hedge trimmers, air compressors.
Izixhobo zeeofisi – iikhomputha, abaprinta, abagadi, iifowuni ze-facsimile, I-scanners.
Izinto zasekhaya – abacoca iifom, abafaki, i-fluorescent kunye ne-incandescent Izibane, , Ukuthunga imishini.
Izixhobo zaseKhikhini – abenzi bekhofi, abaxhamli, abamakhwela beqhwa, i-toasters.
Izixhobo zorhwebo – isibane se-metal halide, isibane soxinzelelo oluphezulu.
Iikhompyutha zokuzonwabisa zokuzonwabisa ekhaya – ithelevishini, iiVCR, imidlalo yevidiyo, I-stereos, izixhobo zomculo, izixhobo ze-satellite.
2 .3 Iimpawu
Ukuphakama okuphezulu ukufikelela kwi-300% yamandla alinganisiweyo (20 seconds)
L on current quiescent, l ow amandla “kwindlela yogcino lwamandla” Ukugcina amandla
Isiqalo Sokuqala Sokuqalisa
4 -step ibhetri ekrelekrele itshaja, PFC (Amandla Factor Ukulungiswa) ukuze itshaja
8 ukusetha kuqala ibhetri yokukhetha uhlobo lwebhetri kunye no-de-sulphation kwiibhetri ezicwangcisiweyo ngokupheleleyo
P owerful izinga isigxina ukuya ku 120 Amp s, selectable ukusuka 0% -100%
Ixesha transfer 10 ms ezithile phakathi ibhetri ne AC, uqinisekisa ngamandla ukuqhubekeka
Smart L E panel elawulwa-kude D
Umthamo wokhuseleko lwe AC
15s ngaphambi kokuba transfer xa AC liqala, ukhuseleko eyongezelelweyo imithwalo xa isetyenziswe generator
A llows ukuqala kwaye ngamandla kunye neebhetri mpilo
Multiple iifeni zokupholisa elawulwa
E xtensive p rotection s ngokuchasene ezahlukeneyo iimeko ezinzima
13VDC ibhetri ukufunyanwa y indawo, awayisungulela kwiinkqubo zamandla ombane
2. 5 Ukusebenza kombane
2. 5 .1 Buyisela
I-APC inverter / tshaja yakhiwe ngokungqinelana yethopholoji ilandelayo.
Ukuguqula: i-Full Bridgeology.
Charge: ikhetha d Ukukhulisa T opology.
It ukusebenza s in- ulwalathiso ally: kwicala elinye kuyo usuqula DC amandla avela ibhetri AC amandla (Mode Inverter) kunye kwelinye icala Iguqula amandla angaphandle a-AC ukuya kumbane weDC basole neebhetri (Mode AC). Yena components amandla efanayo T zisetyenziswakumacala omabini, okubangela Kwi-high-energy transfer transfer efficiency.
Nceda uqaphele ukuba inverter / tshaja unako ukusebenza kuphela kwicala elinye ngexesha elinye (oko kukuthi ayikwazi ukusebenza Njengombonakalisi kunye neshaja ngexesha elifanayo).
Xa asebenza kwimo guqula, i yangoku ngqo (DC) okungena inverter evela amabhetri yi Ihlonywe ngumxhasi omkhulu wokufakelwa kwaye iguqule “Kuye” kwaye “Phuma” yi-Metal Oxide Silicon Field Effect Transistors (MOSFET) ngesantya 50 Hz okanye 60 Hz, kweli nyathelo le DC is kuguquka ombane aphantsi kuhlelwe AC sine wave usebenzisa i Ukucwangciswa kwe-H bridge kunye ne-PWM ephakamileyo (Frequency Width Modulation) buciko. Ithi ke bangene nesiguquli leyo amanyathelo eliphantsi AC ombane ukuya ku-230 okanye 120 volts.
Le yunithi uba 16 bit, 4.9MHZ isilawuli Ukulawula umbane kunye nefomati njengombane we-DC input Kunye / okanye umthwalo umthwalo uhluka.
Ngenxa kahle eliphezulu MOSFET s kunye abaguquli enzima, ovelisa OLUNYULU sine igagasi AC kunye THD eliphantsi.
Le Incopho ngobuchule Sigineer Power APC Series 88%.
T Don ‘ahambisana AC imveliso ye inverters ukwandisa umthamo namandla njengoko kungekho functionality ingqokelela.
U kukhulula amandla
Le inverters Sigineer Power APC Series nezakhono ezahlukeneyo ukucima kombane, iyenza zikulungele yokusingatha izinto ngenkani.
1 Kuba 110% <Layisha <125% (± 10%), akukho e alarm audibl ngemizuzu-14,’beeps 0.5s zonke 1 kule ngcaciso imfutshane 15, kunye Icala (Turn off) emva kokuba imizuzu 15.
2 Kuba 125% <Layisha <150% (± 10%),’beeps 0.5s zonke 1 kunye Icala (Turn off) emva kokuba 1 ngomzuzu.
3 Kuba 300% ≧ Layisha> 150% (± 10%),’beeps 0.5s zonke 1 kunye Icala (Turn off) emva 20.
Qala ngokuQala kwiModeli yokuVikela
Le inverter ke echulwe with “Soft Qala “ Uphawu.
Xa inverter ivuliwe, le ombane output ngokuthe ezithambekileyo ukusuka 0VAC ukuya ombane rated malunga 1.2 umzuzwana. Le ngempumelelo kunciphisa ngenye eliphezulu kakhulu yokuqala inrush yangoku ezirhuqwa imithwalo AC ezifana Ivuliwe Supplies Indlela Power kunyeimithwalo ezenza. Oku kuya kubangela ukuhamba kweemoto eziphantsi ngoku, nto leyo ethetha nefuthe kangako imithwalo kunye inverter.
Emva kokuba inverter ivuliwe, kuthatha ixesha ezisikelwe kuba ekuzithembeni ukuxilonga balungele kunikela amandla ngokupheleleyo. Ngako oko, shintshana rhoqo kwimithwalo emva kwemizuzwana embalwa yokutshintsha kwi-inverter. Gwema ukutshintsha kwi-inverter nomthwalo sele usuqukile. Oku kunokubangela kwangaphambili ukukhusela ukukhutshwa komthwalo. Xa umthwalo uguqulwa, kungadinga amandla angaphezulu okuqala ukuba aqale. Ngenxa yoko, ukuba imithwalo emininzi ixhaswa, kufuneka iguqulwe ngomnye ukuze i-inverter ingaphelelwanga ngokugqithiseleyo kokuqala xa yonke imithwalo ishintshwe kanyekanye.
Sigineer Power APC Series lixhotyiswe i PFC (Factor Amandla ilungisiwe) esebenzayo multistage ibhetri tshaja. Isici se-PFC sisetyenziselwa ukulawula imali Yamandla asetyenziselwa ukuhlawula iibhetri ukwenzela ukuba ufumane umbane ngamandla ngokukhawuleza ukuya kwi-1.
Ngokungafaniyo nezinye inverters ogama max ezihlawulisa ukwehla ngoku ngokutsho ombane kwigalelo AC, Sigineer Power APC Series tshaja uyakwazi kwimveliso max wangoku logama nje igalelo AC ombane na iintlobo 164-243VAC (95-127VAC zemodeli 120V), kunye I-AC freq isebubanzi be-48-54Hz (58-64Hz ye-60Hz model).
I Sigineer Power APC Series inverter na intlawulo yangoku rapid kakhulu ezikhoyo, nesigxina yangoku max zilungiswe kwi-0% -100% nge liner switsha kwi lasekunene uhlobo ibhetri umkhethi. Oku kuza kuba luncedo xa usebenzisa itshaja yethu enamandla kwi ibhanki battery ca pacity encinane. Ngethamsanqa, i nqanawa nga ngempumelelo ukunciphisa max bamthethela zangoku kwi-2 0% iphezulu yayo.
C hoosing “0” kwi uhlobo ibhetri umkhethi uya ukukhubaza ukutshajisa umsebenzi.
Kukho 3 izigaba eziphambili:
Abize Bulk : Eli lokuqala yokubiza. Nangona ukutshaja kweBlue, ishaja inikezela Ibhetri enexesha elikhoyo elilawulwayo. Ishaja iya kuhlala kwi-Bulk umrhumo kude kube yi-Absorption isigxina ombane (isigqibo d yi ibattery ukhetho Uhlobo) kuyafikelelwa.
Software timer iza kulinganisa ixesha ukususela A / C ukuqala de kwitshaja ibhetri ifikelela 0.3V ngezantsi ombane umthambo, wandule ke uzithabathele, eli xesha njengoko T0 kunye T0 × 10 = T1.
Ukufunxa Ukutshaja: Eli nqanaba ukuyibiza yesibini kwaye iqala emva kokuba ukufunxa ombane iye Fi kelelwe. Ukuphuza umrhumo kunika iibhetri kunye nombane rhoqo kwaye kunciphisa DC ukuhlawula ngoku ukugcina umbane wokumisela.
Kweli thuba, i inverter uya s muncwana i timer T1; Ishaja iya kugcina i-voltage yokukhupha kwi-Boost CV mode kuze kufike i-timer ye-T1. Emva koko yehla umbane phantsi kwethamo lokuthambisa. I-timer inexesha elincinci leyure kunye nexesha elide leeyure eziyi-12.
Ziyabuya Ukutshaja: Inqanaba womserbia sesithathu kwenzeka ekupheleni ukufunxa ixesha Ukutshaja. Ngexesha Ukutsalwa kwe-Float, umbane werhafu uncitshiswe kwi-voltage charge charge (egqitywe ngu Ukukhethwa kohlobo lweBattery *). Kule nqanaba, iibhetri zigcinwa zihlawulwe ngokupheleleyo kwaye zilungele ukuba zifunwa Inverter.
Ukuba A / C loqhagamshelo okanye ombane ibhetri lihla ngezantsi 12Vdc / 24Vdc / 48Vdc, kwitshaja lizakucwangcisa kwakhona umjikelo ngasentla.
Ukuba intlawulo ugcina urhulumente edadayo iintsuku ezili-10, itshaja lizakucwangcisa ngabom umjikelo ukukhusela ibhetri.
Uhlobo lweBattery uhlobo
Shintsha isicwangciso Inkcazelo Boost / Vdc Dadisa / Vdc
3 AGM 2 / iLithium Battery 14.6 13.7
4 I-acidi ye-acid ekhohliweyo 14.4 13.6
5 I-EURO yeGel 14.4 13.8
7 ICalcium 15.1 13.6
8 De sulphation 15.5 (iiyure ezingama-4 ziValiwe)
9 A nga sebenzi
Indlela ye-12Vdc (* 2 kwi-24Vdc; * 4 kwi-48Vdc)
Sebenzisa ngePakithi yeeLithithi zeLithium Ion
“Lithium-ion” libhekisela ezahlukeneyo chemistries battery Lithium-based. T yena kakhulu ethandwayo i-ifomati enkulu lithium prismatic yentsimbi phosphate (LiFePO4; LFP) ibhetri.
Isitya sethu sebhetri esisebenzayo sisebenza ngeibhetri ezahlukeneyo ze-lithium, jonga iibhekthi zeebhetri kwaye uqinisekise ukuba ukushaja i-algorithm ifanelana nokutshabalalisa i-voltage.
Ukuba ubuchule bethu ngoku womserbia andaz ‘t ayifani ibhetri yakho lithium, Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi apha info@sigineer.com ukuba ulwenziwo.
Umjikelo de-sulphation kwi utshintsho kwindawo 8 iphawulwa bomvu kuba lo isicwangciso kuyingozi kakhulu xa ngaba n guyz ukwazi kwakhona okwenzayo kuwe. Ngaphambi kokuba uzame ukusebenzisa le mjikelezo kufuneka uqonde ngokucacileyo ukuba yintoni na kwaye uyayisebenzisa nini kwaye ungayisebenzisa njani.
Wha t ebangela sulphation? Oku kwenzeka ngokusebenzisa yimiyalezo le iibhetri, n okanye ukuba iibhetri, ngekungadanga abakhutshwa kangangokuba bengayi kubamkela isimangalo. Lo mjikelo iphezulu kakhulu intlawulo ombane Umjikelo desig n ed ukuzama ukwaphula phantsi sulphate duqweqwe leyo esithintelayo amacwecwe ekuthatheni isimangalo yaye ngaloo ndlela zonke Ow amacwecwe ukucoca nokwamkela isimangalo kwakhona.
Ukutshaja ibhetri olusele
I Sigineer Power APC Series inverter i llows uqale kwaye ngamandla kunye neebhetri .Ngaphezu.
Ngokuba 12V DC imodeli, emva engekangeni ombane ibhetri ngezantsi 10V, ukuba iswitshi isekhona (kwaye njalo) agcinwa “ON” indawo, lo inverter lisoloko edibene ibhetri, kwaye ombane ibhetri kungasebenzi ‘t drop ngezantsi 2V, le inverter uya kukwazi ibattery kanye amagalelo AC abaqeqeshiweyo.
Phambi kokuba ombane ibhetri ukuya ngezantsi 9VDC, ukutshaja nga izingenele xa iswitshi yabuyela “Cima”, emva koko “ON”.
Xa ombane eya ngezantsi 9VDC, kwaye ngephutha ushintshele OFF okanye uyeke inverter ukusuka kwibhetri, le inverter akayi kuba nako ibattery kwakhona, kuba CPU ulahlekelwe memory ngexesha lale nkqubo.
Qala ngaphandle komsebenzi webhethri ungenziwa ngokwezifiso kwisicelo.
Ukuhlawula kwangoku imodeli nganye
Th zibiza e amandla kuya izinga ityala lokubeka emgangathweni kwimizuzwana eyi-3. T yakhe kungadala generator ukuba uwise frequency, esenza transfer inverter kwimo ibhetri.
Kucetyiswa ukuba ukubeka ngokuthe umthwalo ugcwalisa kwi le generator ngokuthi wayicima iswitshi bamthethela ukusuka min ukuya max. Kunye ne 15s ukuswitsha kulibazisa inverter lethu s umvelisi ixesha elaneleyo spin up. Oku kuya kuxhomekeka kubukhulu bomvelisi kunye nereyithi yentlawulo.
Njengomthetho oqhelekileyo, amaNinzi Ukutshaja Current kufuneka libekelwe umda 3 0% ye umthamo ebhankini bebhetri. Ukusetyenziswa kokuhlawula okuphezulu kunokusetyenziswa xa kuvunyelwe Umenzi webhetri.
Qaphela: Nceda sebenzisa indlela othengisa ‘s ezimcaba-intloko screwdriver amancinane ukuba intlawulo yangoku utshintsho yolawulo kakuhle ukuphepha iminyaka lekhefu ngenxa phezu – ba jikela.
Ukuze ukuqinisekisa ukusebenza best of AC kwitshaja xa igalelo AC ivela wenkunkuma, le generator yokulinda kufuneka abe umthamo ubuncinane 150% ngaphezulu ngaphezu inverter.
Isilumkiso! Ukusebenza kunye wenkunkuma rated ngaphantsi-okanye generator kunye nefom wave ezingenachaphaza kunokubangela ukusilela mveku engekho phantsi kweziqinisekiso.
S wift Power Transfer
Ngoxa kwimo yokulinda, i-AC igalelo lwe inverter lihlala esweni. Naliphi na umbane we-AC uwela ngaphantsi AC eliphantsi uhambo ombane ombane (154 V ac, ucwangciso olungagqibekanga ngenxa 230VAC, 90VAC for 120V AC), lo inverter kuzenzela emva Custom Buyisela ngamandlaubuncinane ukuphazamiseka izixhobo zakho zombane – ukuba nje icinyiwe i inverter . Ukutshintshwa Kwimo elindileyo kuhlobo Inverter Senzeka nama-10 kwimizuzwana emininzi. Kwaye nokuba mfutshane ukusuka Inverter imo Imo yokulinda.
T ixesha lakhe transfer idla fast ngokwaneleyo ukuze ugcine izixhobo zakho (kubandakanywa iikhompyutha) sinokubanamandla phezulu, ngaloo ndlela inverter yethu zingasetyenziswa njenge umgca interactive UPS.
Ukudluliswa kwamandla okuhambelanayo
Xa umthwalo budluliselwe ukusuka output inverter AC ukuya kwenye umthombo AC ukhuphelo yamandla a t ransfer s gqwirha, apho kuya kubakho Ukuphazamiseka kokuphela kwamandla kumthwalo wokudluliselwa ukuba kwenzeke.
Ukungahambi kakuhle kwesigaba kunye amaza imveliso inverter AC kunye nomthombo AC elilalela in transfer kungenzeka ukuba umonakalo yogcino AC umthombo / umthwalo lovukelo.
Ne design busebenze nobunzima kakhulu, inverter lwethu luya kuqala ukutshixa kwi rhoqo kunye sigaba igalelo kunxweme amandla / generator amandla wenze kakuhle kunye nokudluliselwa ekhuselekileyo kwindawo zero ombane ukuze kuncitshiswe ifuthe kwiimodyuli ngamandla.
Kukho 1 yesibini-5 ukulibaziseka ukususela kwixesha izivamvo inverter ukuba gqolo abaqeqeshiweyo AC ukho kule igalelo kwiitheminali ukuba xa ukudluliswa yenziwe. Oku kulibaziseka eyakhiwe ukunika ixesha elaneleyo ukuba generator ukujija-up ukuya ombane ezinzileyo kunye rhoqokwaye uphephe irileyi eqhaqhazela. I-inverter ayiyi kuthunyelwa kwi-generator ide ifihlile kwimveliso ye-generator. Le akukholibaziso ikwayilelwe ukunceda zo- switch rhoqo xa eluncedo igalelo iyahlozinga.
2. 5. 4 Umgcini mandla
Kukho be-2 ezahlukeneyo for APC i nverter: “Amandla On” yaye “cima”.
Xa amandla iswitshi kwi “Unit Cima” indawo, lo nverter I sinokubanamandla asuswayo.
Xa utshintsho amandla kuvuliwe komnye “Amandla Wekhusi Auto” okanye “Amandla Wekhusi Cima”, lo inverter kuxhaswa on.
Umsebenzi Power mbane kukuba azinikezele ukulondoloza Ibhetri Amandla xa AC igunya okanye kancinane ezifunwa yi imithwalo.
Kule ndlela, i-inverter ikhupha umphumo we-AC ukhangela umthwalo we-AC (oko kukuthi, umbane wombane). Nanini na umthwalo AC (mkhulu 2 5 watts) ivuliwe, lo inverter ingqalelo imfuneko yokuba amandla ngokuzenzekelayo iqala inverting kunye neziphumo uya ombane ngokupheleleyo. Xa kungekho umthwalo (okanye ngaphantsi kwe-2 5 watts) elibhaqiweyo, lo inverter ngokuzenzekelayo ebuyela kwi indlela yokukhangela ukunciphisa ukusetyenziswa kwamandla ukusuka elunxwemeni bebhetri.
In “Isigcini-mbane kwi” imowudi, lo inverter ndiya kubatsalela amandla ikakhulu kwizimvo mzuzu s, oko ukusetyenziswa bengasebenzi ngokuphawulekayo ukunciphisa D.
T naye verter yi mveliso engakwazanga ukuhlawula ukubona umthwalo 250ms kuzo zonke 3 0 s yesibini. Th na umjikelo ungenziwa ngemfuneko ukuya kwimizuzwana 3 thru le SW-3 kwi-DIP iswitshi.
Qaphela: Amandla Ubuncinane umthwalo ukuba inverter ngaphandle imo yokucima (Power Wekhusi On) yi Watts 50. Imilinganiselo yecandelo lokwahlukana, umbane wendlela yokulala i-50W phakathi kwe-Hot1 kunye ne-Neutral kunye ne-200W phakathi kwe-Hot 1 kunye ne-Hot 2. Akukho mthwalo okhoyo phakathi kwe-Hot2 kunye Neutral.
Qaphela: Amandla Ubuncinane umthwalo ukuba inverter ngaphandle imo yokucima (Power Wekhusi On) yi Watts 25.
I Sigineer Power APC Series yakhelwe nge ephantsi ngokungaqhelekanga i ndiqhuba p ower c onsumption leyo kuphela nje 0.8-1.8% bamandla ayo ulinganiselwe.
Xa kwimodi yengqondo yokucinga, i-LED yamandla aluhlaza iya kukhanya kwaye inverter iya kwenza isandi sokukhawula. Ngefuthe elipheleleyo lombane, i-LED yamandla oluhlaza iya kukhanya ngokukhawuleza kwaye inverter iya kwenza isandi esilungeleyo. Xa inverter isetyenziselwa “amandla angenakuphazamiseka” ukunikezelwa kwemisebenzi yemoya yokucinga kufuneka ihlulwe.
Ezinye iifayili xa zihlolwe ngumenzi wesithintelo azikwazi ukufunyanwa. Izibane ezincinci ze-fluorescent ngumzekelo oqhelekileyo. (Zama ukutshintsha i-plug polarity ngokuguqula iplagi.) Ezinye iikhomputha kunye nezixhobo zobuchwepheshe ezinezinto ezinamandla zinezinto ezingenayo umthwalo kuze kubekho umbane wecala okhoyo. Xa oku kwenzeka, nganye iyunithi ilinde ukuba enye iqale. Ukuqhuba le mithwalo ibe ngumthwalo omncinci umthwalo kufuneka usetyenziswe ukuletha inverter ngaphandle kwimodi yokukhangela, okanye i-inverter ingahle ihlelwe ukuba ihlale epheleleyo kwimveliso yombane.
2. 5. 5 Protection s
I Sigineer Power APC Series inverter kufakwa kakhulu ukhuselo s ngokuchasene kwiimeko ezahlukeneyo ngqwabalala / iziphene.
Ezi Ukhuselo ziquka:
AC ukhuseleko Igalelo phezu ombane / AC Yegalelo ukhuseleko ombane aphantsi
Low alarm ibhetri / ibhetri High alarm
Phezu ukhuseleko lobushushu / ukhuseleko umthwalo phezu
Ukukhuselwa kwesekethe (1 emva kwephutha)
Xa Ngaphezulu lobushushu / Ukutyhubela umthwalo kwenzeka, emva kokuba isiphoso kususiwe, inkosi iswitshi kufuneka ngocwangcisa kwakhona ukuqala inverter.
I Low qhuqha y uhambo ombane indawo ungenziwa ngemfuneko ukusuka ixabiso engakwazanga ukuhlawula of 10VDC ukuba 10.5VDC ngalo SW1 kwi iswitshi DIP.
Le inverter uza kuya Kule ukhuseleko Temp xa h badla echibini Temp. ≥ 105 ºC (221 ℉), kwaye kuya Icala (cima ikhompyutha Output) emva kwemizuzwana engama-30. Iswitshi kufuneka kwakhona ukuqalisa inverter.
I Sigineer Power APC Series Inverter unani umva ukutyisa okhusela alifuni abanikela n AC ombane kwi-AC terminal igalelo kwimo Invert.
Emva kokuba isizathu isiphoso kususiwe, lo inverter ekufuneka kutsha ukuqala uku- emsebenzini.
2. 5. 6 R control emote
Ngaphandle lenjongo switsha kwi phambi inverter, ligqiza LED okanye LCD shintsha ezingaphezulu eqhagamshelwe kwizibuko ekude kwi kwicala le DC kwi inverter ngokusebenzisa RJ11 okanye RJ45 cable nako ukulawula ukusebenza inverter.
Ukuba eyongezelelweyo uneswitshi panel liqhagamshelene inverter nge “ulawulo zibuko kude”, kunye ne lenjongo master switsha kwi imeko inverter, iiphaneli ezimbini iza kuba con enhle kwaye idala ngaxeshanye, w itshintshela hichever yokuqala ukusuka ‘Unit “ukuvala” Amandla seyiva off “okanye” Amandla mbane kwi “, kuya ngamandla inverter on.
Ukuba imiyalelo ukususela impixano lenjongo ezimbini, le inverter uya kwamkela umyalelo ngokungqinelana ziziiprayorithi zilandelayo:
Umgcini wamandla kwi> Power saving saver off> Power off
Kuphela xa wajika omabini panels ukuba “Unit Cima” indawo, iya inverter sinokubanamandla asuswayo.
Ungaze usike intambo sefowuni xa intambo iqhotyoshelwe apha ukuze inverter ze battery liqhagamshelene inverter. Nditsho r inverte icinyiwe, oku enokuwona PCB ekude ngaphakathi ukuba ngentambo mfutshane circuited ngexesha ahlabayo.
2. 5. 7 LED Isalathisi & LCD
Isimo ukusebenza inverter kuboniswa LED ‘s kunye ingcaciso kwi-sticker LED.
AMANDLA AMANDLA Ukukhanya kwe-LED OKUHLEKILEYO kwi-AC Mode
INVERTER ON Ukukhanya kwe-LED OKUQALA kwi-Inverter Mode
KWEENKQUBO Ukukhanya kwe-LED ephuzi kwiMeko yokuLawula ngokukhawuleza
INKQUBO YOKUQALA Ukukhanya kwe-LED ekhudlwana kwiMeko yokuTyala kwe-Float
KWI-TEMP TRIP RED LED ukukhanyisa kwi Ifo er Ubushushu
UKUTHANDA UTHANDO LWESITHILI Ukukhanya kwe-RED LED kwi-Over Load
AMANDLA OKUNYE GREEN LED ukukhanyisa Amandla Mode Saver(Power Saver Layisha ≦ 25 W)
T he inverter ukuba idityaniswe panel yolawulo LCD kude.
2. 5. 8 Alarm eVakalayo
Le inverter inika alarms oluvakalayo xa iimeko ezilandelayo.
IBhettery Voltage Low Inverter oluhlaza LED Ukulayitwa, kwaye Ayanda beep 0.5s zonke 5.
KwiBattery Voltage High Inverter oluhlaza LED Izibane, kwaye Ayanda beep 0.5s zonke 1,
Kunye noPhulo emva kweminyaka engama-60.
Ukuguqula iModelo engaphezulu (1) 110% <umthwalo <125% (± 10%), Akukho alarm oluvakalayo ngemizuzu-14,
‘beeps 0.5s zonke 1 ngo-15 ngomzuzu th kunye Icala emva kwemizuzu eli-15;
(2) 125% <umthwalo <150% (± 10%),’beeps 0.5s zonke 1 kunye Icala emva 60s;
(3) Layisha> 150% (± 10%),’beeps 0.5s zonke 1 kunye Icala emva 20;
Ove r Ubushushu Ukushisa kwehlisa kwesikhashana. ≥105ºC (221 ℉), Kule Temp ebomvu LED Izibane,’beeps 0.5s zonke 1;
Kuba 1-3KW, akukho multiple enye elawulwa DC fan leyo iqalisa ukusebenza ngokwezi logics zilandelayo.
Ku-4-6KW, kukho enye multipl e elilawulwa DC fan enye fan AC. Umtshini we-DC uza kusebenza ngendlela efanayo naleyo kwi-1-3KW, ngelixa umshicileli we-AC uza kusebenza emva kokuba kukho imveliso ye-AC ukusuka kwi-inverter.
Ngoko xa inverter ikwindlela yokuchola ngamandla seyiva, ifeni AC iya kusebenza ukususela amaxesha ngamaxesha ukuphendula ubume wathunyelwa inverter ikwimo ngamandla wekhusi.
Ukusetyenziswa kwe-DC fan kumgca we-DC wokuphela kulawulwa kule ngcamango elandelayo:
Isimo Faka Isimo Ikhefu Ukukhawuleza
YEZIMPILO ZEZEMPILO T < 85 ℃ (185 ℉) T ≥ 85 ℃ (185 ℉) 50%
UMSEBENZI WENKQUBO I ≤ 50% Max I> 50% Max 50%
I> 50% Max I MicrosoftLanguagePortal 40% Max 100%
(INV MODE) Layisha <50% Layisha ≥ 50% 50%
Layisha ≥ 50% Ukuthwala ≤ 40% 100%
Vumela ubuncinane 30cm of clearance arou nd i inverter ukulungiselela ukungena komoya. Qinisekisa ukuba umoya unako ukujikeleza ngokukhululekile malunga neyunithi.
Izinga lengxolo Fan <60db kumgama 1m
2.5.1 0 DIP Switches
Kwiphepha le-DC le-inverter, kukho iinguqu ezinhlanu ze-DIP ezivumela abasebenzisi ukuba benze ngokwezifiso ukusebenza kweso sixhobo.
Tshintsha # Shintsha Umsebenzi Isikhundla: 0 Isikhundla: 1
SW1 (AC Priority) Battery Low Trip Point 10.0VDC 10.5VDC
SW1 (Battery Priority) 10. 5 VDC 1 1 .5VDC
SW2 (230Vac) Ubungakanani bokungena kwe-AC 1 76 -2 42 V ac ± 4% 1 60 -2 64 V ac (40Hz +) ± 4%
SW2 (120Vac) Ubungakanani bokungena kwe-AC 100-135 V ac ± 4% 90-135 V ac (40Hz +) ± 4%
SW3 Amandla Gcina Ukugqithiswa / OKUHLEKILEYO Inverter Off Power Saver On (3imizuzwana)
SW4 U tshintshi 50Hz 60Hz
SW 5 Battery / AC Priority AC Priority battery Priority
Low Trip Battery Point (SW1) :
Ukukhutshwa okujulileyo kwebhetri ye-asidi yikhokelo kukukhokelela ekulahlekeni okuphezulu kwikhono kunye nokuguga kwasekuqaleni. In ezahlukeneyo isicelo s inqanaba ombane yoqhawulo ezahlukeneyo ephantsi ikhethwa. Ngokomzekelo, ukusetyenziswa kwelanga, Umsebenzisi unenjongo yokuba ne-DOD encinci yokwandisa umjikelezo wokuphila kwebhetri. Ngoxa zokusebenza mobile umsebenzisi s May Unenjongo yokuba ne-DOD ngaphezulu ukunciphisa umthamo webhethri kunye nokuhamba kwesisindo.
Kuba 12VDC model s, xa inverter ikwindlela yokuchola ephambili AC (SW5 kwi “0”), Phantsi Battery Trip Point selectable kwi 10.0 /10.5VDC. Inokubuyiselwa elicwangcisiweyo 10.5 /11.5 V dc nge SW5. Oku kukuthintela amabhetri avela ngokugqithiseleyo ngelixa kunomthwalo omncinci kuphela owenziwe kwisithensi.
* 2 kwi-24VDC, * 4 kwi-48VDC
AC yokufaka Range (SW2):
Kukho zamkelekile uluhlu AC igalelo ezahlukeneyo s kwiintlobo ezahlukeneyo imithwalo.
Kuba abathile isalamane lu ezibuthathaka isixhobo se-elektroniki s, indawo emxinwa input uluhlu 1 76 -2 42 VAC (100-135V njengezibonelo 120Vac) ziyafuneka ukukhusela m.
Nangona ezinye resistive umthwalo s okuyinto basebenza uluhlu ombane olubanzi, uluhlu ngegalelo AC ungenziwa ngemfuneko ku-1 60 -2 64 VAC (90-135V njengezibonelo 120Vac), oku kuyanceda lombane s kunye kakhulu AC input amandla ngaphandle Ukutshintsha rhoqo kwibhanki yebhetri.
I n ukuze benze inverter ukwamkela ukungcola y amandla avela ijanareyitha, xa SW2 ivuliwe ukubeka “1”, lo inverter uya uzakufun aukugqithisa igalelo AC kunye ombane ngokubanzi kunye rhoqo (40Hz plus f okanye 50Hz / 60Hz). Ngako oko, ishaja ye-AC iya kusebenza kumbane obanzi kunye nohlu lwe-freq (4 3 Hz plus f okanye 50Hz / 60Hz).
T wakhe uya kukuphepha itshintshela rhoqo phakathi ibhetri kunye generator. Kodwa abanye imithwalo ezibuthathaka ubunzima ukusuka ezantsi amandla esemgangathweni.
Le nobubi bendlela kufuneka kuzaliseka ngokucacileyo.
Power Gcina Qhuba ngaphezulu ON / OFF (SW3):
Phantsi ophambili Indlela Ibhetri (SW 5 i n beka “1”), lo inverter banoku phakathi kwendlela ezimbini: Power Indlela Saver (SW3 endaweni “1”) kunye neYunithi Off Ukutshaja Mode (SW3 endaweni “0”). I p ower Tshintsha kufuneka sibe “mbane kwi” kwindawo lonke ixesha usebenzisa le misebenzi.
In Mode Saver Power, lo inverter ekuqaleni kwimo yokulinda kwaye ithumela sazi ukuba ukubona ubukho umthwalo qho kwimizuzwana-3. I-pulse nganye ihlala kuma-250m. Inverter iya kuhlala emodi yokulinda kuze kube ngumthwalo. Emva koko ke uya kuvuka esuka kwimo yokulindakwaye uqala ku gqiba umbane esuka ebhankini ibhetri unikezele umthwalo. Njengoko lo msebenzi ungaphantsi kweBhettery Priority, i-inverter iya kuhlala ikhetha ukuguqula umbane ukusuka kwibhetri yokuqala nangona kukho i-AC ekhoyo enegalelo. Kuphela xa ombane ibhetri lingaphantsi eliphantsi alarm ombane ngongoma, iya inverter tshintsha igalelo AC amandla ibattery kwaye unikeze umthwalo ngexesha elifanayo.
Le Mode Saver Power zingatshintshwa kwi Unit Off Ukutshaja imo nge SW3 ngokuthi ukuguqukela ukuba “0” isikhundla (SW 5 nangoku i n “1”).
“Unit Off Ukutshaja ‘uya kwenza itshaja inverter lokubiza neebhetri kangangoko kunokwenzeka ngelixa ngaphandle ngokuchitha nabo.
In “Unit Off Ukutshaja” imo, lo inverter iya kuhlala kwimo yokulinda ngaphandle uyasabela imithwalo. Ngeke imveliso naliphi na amandla ukuba umthwalo ivuliwe, kwaye bahlale bengasebenzi kweli kuphela xa kungekho igalelo AC.
Xa AC igalelo abaqeqeshiweyo ngoku, iya kuqalisa ukutshajisa nodluliselo namandla imithwalo.
Olu phawu isendaweni ezifanelekileyo izicelo apho kufuneka zolondolozo amandla neebhetri.
Char za ziya isebenze kanye abaqeqeshiweyo AC ukho, lo gama nokudubula ikhubaziwe.
Le inverter kudla kuphela nje kancinci njengoko 3 watts kwi “Unit Off Ukutshaja” indlela.
Imvama yokuveliswa kwe-inverter ingasetyenzwa kwi-50Hz okanye i-60Hz nge-SW4 eyenza ishaja yokuguquguqula imodeli yamazwe ngamazwe amaninzi kwiinkqubo zombane.
AC / Ibhetri Priority (SW5):
I-inverter yethu yenzelwe i-AC ephambili ngokungeyiyo. Oku kuthetha, xa AC input langoku, ibhetri iya kuhlawuliswa kuqala, kwaye inverter iya idlulisele AC ngegalelo amandla umthwalo. Kuphela xa igalelo AC uzinzile ukuba kwithuba leentsuku ezili-15 aya kuqalisa inverter umjikelo ibhetri inverting ukukhusela ibhetri. Emva 1 eliqhelekileyo ac Umjikelo womserbia nge sicinywa ziya kubuyiselwa.
I-AC Priority kunye Battery Priority iswitshi SW 5 . Xa ukhetha kuqala ibhetri, i inverter uya gqiba ukusuka ibhetri nangona AC igalelo. Kuphela xa ombane ibhetri lufika ombane aphantsi alarm kuyo (10.5V dc ye 12V dc, 21Vdc for 24Vdc, 42Vdc for 48Vdc ) , iya transfer inverter ku AC i edolophini, ubaqononondise ibhetri, kwaye switsha ubuyele ibhetri xa ibhetri ngokupheleleyo icala. Lo msebenzi isikakhulu umoya / iinkqubo solar usebenzisa amandla eluncedo njengoko umva up.
Akukho te: Kwindlela ephambili ibhetri, xa amagalelo abafanelekayo AC okokuqala kwaye ombane ibhetri ngezantsi 12.5Vdc ( 1 2 .5V dc ye 12V dc, 25Vdc for 24Vdc, 51Vdc for 48Vdc) , lo inverter uya kungena kuqala ibhetri kuphela emva kokuba umjikelo we b ulk c harging kwaye ukufunxa womserbia na entanjeni ile . Le inverter akayi kungena edadayo yokutshaja imo.
Le inverter ingaqala up generator xa ombane ibhetri iya aphantsi.
Xa inverter eya alarm ibhetri iphantsi, loo nto ukuthumela uphawu ukuqala i generator babuye le generator off emva igcwale ibhetri.
Ngokuzenzekelayo gen isiqalo hlobo luza kusebenza kuphela umbane apho babe nokwazi lokuqalisa oluzenzekelayo. I wenkunkuma kufuneka uqale kwaye uyeke ulawulo [oko kukuthi, i-zokuqalisa sombane kunye ziliminxe yombane (beeyunithi ipetroli)], kunye nabenzi boluvo zokhuseleko ukuze bakwazi ukuqalisa nokumisa ngokuzenzekelayo.
Kukho evulekileyo / relay obusondeleyo uya short circuit iintambo ezintle nezimbi evela wenkunkuma ukuqala ulawulo. Igalelo DC ombane kuyohluka, kodwa max lwangoku relay ntli yi 16Amp.
The Auto Generator Start izikhonkwane terminal nje ngamaza .
Ngaphezu koko , ezi izikhonkwane ezimbini nazo zingasetyenziswa abafowunelwa owomileyo ukuba athumele ” Phantsi Battery Voltage ” uphawu kwi sixhobo sangaphandle alarm.
2.5.1 2 yebhetri Ubushushu axakekile
Ukusebenzisa intlawulo ombane efanelekileyo kubalulekile ukuze kufikelelwe yokusebenza ibhetri ngokupheleleyo ixesha elide. Le ombane intlawulo efanelekileyo efunwa neebhetri utshintsho kunye lobushushu ibhetri.
Le woluvo lobushushu Ibhetri ivumela umlawuli ophetheyo yokuqhubekeka ukulungisa ombane intlawulo ngokusekelwe lobushushu ibhetri yoqobo.
Ubushushu imbuyekezo ye ombane isigxina iqinisekisa ukuba ibhetri ufumana intlawulo ombane efanelekileyo njengoko lobushushu ibhetri lohlukile .
Le Umgca lonke lixhotyiswe Ibhetri Ubushushu Eqonda ukuba ukwanda ngendlela yokutshaja.
It uthumela ulwazi ngqo kwi kwitshaja, leyo inyenyisa ngokuzenzekelayo ombane ukunceda ukuqinisekisa ophetheyo ibhetri ngokupheleleyo ngokuxhomekeke lobushushu kokugquma kwi yofakelo kwebhetri yakho.
Xa ombane ibhetri kwama-40 ℃ (104 ℉ ), kuya kunciphisa ombane ukuyibiza ngu 0.1Vdc yonke iqondo lobushushu avuke.
We Sicebisa ukuba ufake Ibhetri mvo Ubushushu kuzo zonke iibhanki ukuba ukukhusela iibhetri zakho kunye nokubonelela womserbia ngokupheleleyo yebhanki nganye.
Le woluvo lobushushu Ibhetri lokungqinga ecaleni ibhetri okanye nayiphi na enye indawo apho iqondo lobushushu ngqo ibhetri kungabonwa ezifana ibhetri nezinye izinto kuyanda.
Le theyibhile ilandelayo ichaza malunga yimalini ombane usenokwahluka ngokuxhomekeke iqondo lobushushu iibhetri.
Inverter Imeko Tempera esi- on BTS itshaja Operation
Indlela itshaja BTS ≥ 50 ℃ (122 ℉ ) iyavalwa ngokuzenzekelayo itshaja
BTS ≤ 40 ℃ (104 ℉ ) ujika ngokuzenzekelayo kwi charger
Indlela Inverter 40 ℃ (104 ℉ ) ≤ BTS ≤50 ℃ (122 ℉ ) Kwandisa ombane aphantsi evala phantsi ingongoma ngu 0.5Vdc
BTS ≥ 50 ℃ (122 ℉ ) Phezu system p Icala
A Battery Ubushushu woluvo sele inikwe njenge eyahlukileyo acc essory. It iza 32.8 ‘ / 10m intambo.
Kubalulekile: Ukuba ubushushu ibhetri kuvunyelwa ukuba bawele kumaqondo kubanda kakhulu, lo inverter kunye BTS usenokungakwazi ukuba uyitshaje eyiyo neebhetri abandayo ngenxa imida ubuninzi ombane le inverter. Qinisekisa iibhethri akhuselwe kubushushu kakhulu.
Ukuze ufumane ulwazi oluthe vetshe lobuchule, nceda uqhagamshelane nathi.
2. 5 .1 3 Ezinye iimpawu
Amandla ebhetri ukubuyisa y ekuqaleni
Emva ombane aphantsi ibhetri uvale (10V for 12V imodeli okanye 20V for 24V imodeli okanye 40V zemodeli 48V ), lo inverter unako ukubuyisela emsebenzini emva ombane ibhetri kwakhona ukuba 13V / 26V / 52V (ngamandla utshintsho lumane ” On ” indawo). Lo msebenzi inceda ukugcina abasebenzisi yabasebenzi kratya ukuze uyisebenzise le inverter xa ombane aphantsi ibhetri ebuyela kuluhlu eyamkelekileyo kwiinkqubo kwamandla ngokutsha.
Ungaze ushiye imithwalo ingakhathalelwanga, eminye imithwalo (njenge wesiFudumezi) kunokubangela ingozi s kwiimeko ezinjalo.
Kubhetele ukuba uvale yonke off emva kohambo ombane aphantsi kwe ukuba ushiye umthwalo wakho kwengozi yomlilo . Akukho mntu ufuna s ukuba abuyele ekhaya, ukufumana indlu engqongwe iilori ngomlilo, yaye andwebileyo ebumelwaneni amatakane iiglasi hot nendlu yakhe.
Le inverter unako elicwangcisiweyo qala a wenkunkuma xa ombane ibhetri iya aphantsi.
Xa inverter eya alarm ibhetri iphantsi, loo nto ukuthumela uphawu ukuqala i wenkunkuma, babuya le generator off emva igcwale ibhetri.
Ngokuzenzekelayo gen isiqalo hlobo luza kusebenza kuphela umbane eyenzelwe ukusebenza ngale phawu. Th ere i ivula / ivale relay ukuba uya short circuit intambo ezintle nezimbi ukusuka a wenkunkuma. Igalelo DC ombane kuyohluka, kodwa Max lwangoku relay ntli yi 16Amp.
I lonke umgca inverters ezenzwe kunye ukutyabeka conformal kwi PCB , iyenza amanzi, namhlwa, kunye nothuli ukumelana.
Nangona ezi iiyunithi zenzelwe ukumelana umhlwa evela emoyeni anetyuwa; abayi atshize ubungqina.
3.1 izimpahla and Inspection
Ngocoselelo susa inverter / sokugcwalisa yayo yokuthumela impahla kunye nokuhlola konke okuqulathwe.
Qinisekisa ezi zinto zilandelayo zibandakanyiwe:
· I-Inverter / Charger
· Red neendebe terminal DC abamnyama
· AC terminal block inshorensi kunye ngezikhonkwane ezimbini Phillips
· Esisangqa iimbumbulu ezimbini no-4 M8 ngezikhonkwane Phillips (efakwe kwi iiclamps DC).
· Enye Manual Umnini kaThixo
Xa izinto zibonakala ukuba ilahlekile okanye yonakele, qhagamshelana nomthengisi wethu eligunyazisiweyo okanye nathi . Ukuba kunokwenzeka, gcina ibhokisi yakho yokuthumela. Oku kuza kunceda ekukhuseleni inverter yakho umonakalo ukuba nanini kufuneka ibuyiselwe inkonzo. Gcina ubungqina-of-ukuthenga kwakho njengerekhodi ubunikazi bakho; iza kufuneka ukuba iyunithi kufuneka kufuna umsebenzi iwaranti.
Landela yonke imithetho yendawo ukufaka inverter.
Nceda ufake i izixhobo a n ngaphakathi indawo owomileyo, ezicocekileyo, Cool kunye umoya olungileyo.
Ubushushu Ukusebenza : – 10 ℃ ukuya 40 ℃ (-14 ℉ ukuya 104 ℉ )
Lobushushu Storage : – 40 ukuya 70 ℃ ( -40 ℉ ukuya 158 ℉ )
Ukufuma Relative : 0% to 95% , non – nokucutheka
Ukupholisa : ngenkani umoya
ISILUMKISO: Eminye imizekelo lo inverter s are onzima. Sebenzisa iindlela ezifanelekileyo ukunyusa ngexesha ufakelo ukuthintela ukwenzakala lobuqu .
Le inverter akufunekanga ifakwe kwindawo evumela uthuli, umsi, izinambuzane okanye nezikrekrethi ukungena okanye ukuvala umoya imingxunyana le inverter ngayo.
Le ngingqi kufuneka bakhululeke nayiphi na ingozi amafu, amanzi okanye naziphi na ezinye ulwelo ukuba nako ukungena okanye kuwa phezu inverter.
I lonke umgca inverters iye phambili kunye ukutyabeka conformal phezu PCB, iyenza amanzi, namhlwa, kunye nothuli ukumelana.
T yimpilo inverter yeyona ekungaqinisekwanga ukuba kusetyenziswa kwezi ntlobo iindawo, kunye neentsilelo inverter phantsi kwezi meko aniyi kuzigqubuthela phantsi kweziqinisekiso.
3 . 3 DC iingcingo zombane
Kucetyiswa yibhanki ibhetri kugcinwe kufutshane kangangoko kule inverter. Le ilandelayo ke ukhetho kweentambo ecetyiswayo 3 imitha DC cable.
Nceda fumana ubukhulu lincinane ilandelayo ucingo. Kwimeko ka-DC cable elide ngaphezu 3m, nceda ukwandisa icandelo umnqamlezo intambo ezakunciphisa ilahleko.
Power Input ombane DC wire yobu-
Nceda f ollow i ngasentla ubuncinane ubungakanani wire imfuneko .
Enye cable kungcono ngaso, kodwa xa kukho ingxaki ekufumaneni ubungakanani acetyiswayo okanye intambo enkulu , iintambo ezininzi ezincinane iya kusebenza. Performance nayiphi na imveliso nokuba ingaphuculwa yi ngentambo ziyatyeba kwaye elifutshane runs, ngoko Ukuba uyathandabuza ngeenxa phezulu kwaye ugcine ubude mfutshane kangangoko.
iintambo Battery kufuneka ukuba crimped (okanye kukhethwa, soldered kunye crimped) lugs ucinezelo ubhedu ngaphandle kokuba aluminiyam lugs mechanical zisetyenziswa. uqhagamshelo Soldered wedwa azamkelekanga. yobunjani ephakamileyo, iintambo battery ul-kuluhlu ziyafumaneka .Ezi iintambo ngokwebala esinebhakhowudi kunye noxinzelelo crimped, ezinjengeetheminali ring etywiniweyo.
terminal Battery kufuneka ecocekileyo ekunciphiseni umlo phakathi terminal DC kwaye uqhagamshelwano ngentambo. A elibi ubumdaka okanye igcwala ekugqibeleni kukhokelela intambo terminal nobushushu ngamaxesha draw eliphezulu yangoku. Sebenzisa ucingo brush abantamo kwaye susa yonke ubumdaka umhlwa evela iiterminal ze battery kunye neengcingo.
Ukunciphisa kokuphazanyiswa RF
Ukunciphisa ngefuthe uphazamiseko obuphumayo, bajije iintambo DC. Ngakumbi ukunciphisa uphazamiseko RF, nesihlangu iintambo kunye sheathing / ngefoyile ye sobhedu / nangegolide.
Taping iintambo battery kunye ukunciphisa inductance
Musa ukugcina iintambo ibhetri kude ngaphandle. Kwimeko akukho lula ukuba bagqwethe iintambo, abagcine duct kunye ukunciphisa inductance zabo. inductance Ukuncipha iintambo battery inceda ukwehlisa yombane uqhutyelwe. Oku kunciphisa yama- kwi iintambo battery yaye kuphuculwa ukusebenza kunye nokusebenza.
Isilumkiso Le torque Uluhlu ukukala DC terminal yi 12.5NM-20.5NM (9.25-15.19 iponti-ezinyaweni), kunye nokurhafiswa wacebisa torque yi 17NM (12.6 iponti-ezinyaweni). Phezu torquing lowanyathela ethole.
Le inverter ke andinakukubuyisa wokwephuka ezikhuselweyo. Uguqula ezichaseneyo ibhetri kwigalelo ngendibaniso DC iya kubangela umonakalo isigxina inverter okungabandakanywanga phantsi kweziqinisekiso. Ngalo lonke ixesha hlola wokwephuka phambi kokuba nxibelelwano inverter.
Le inverter iqulethe capacitors ukuba ukuze avelise ube yintlantsi, xa uqhagamshele ibhetri kuqala. Musa entabeni ngendlela evalelwe gumbi kunye ibhetri kungena okanye iigesi .
Qinisekisa i inverter ucimile phambi zokuqhawula iintambo ibhetri, nokuba AC igunya olusuka igalelo inverter.
3. 4 AC iingcingo zombane
Siyaleza usebenzisa 10 ukuya 5Awg ucingo ukudibanisa ukuya terminal ac block.
Xa kwimo AC i-AC igalelo mbane kuya kunika zombini imithwalo kunye AC itshaja, ucingo gauge yatyeba ngenxa AC Igalelo iyafuneka. Pls babonane kwezombane abaqeqeshiweyo malunga ethile gauge wire ezifunekayo ngokwemigaqo izinto ucingo kunye namandla inverter.
Kukho iindlela ezi-3 ezahlukeneyo kokuqhagamshelana terminal ibhloko kuxhomekeka model. Zonke wirings ezi CE yokuthobela, Mthiye inkxaso yethu obuchwepheshe ukuba akuqinisekanga ngendlela iingcingo ngayo nayiphi na inxalenye inverter yakho.
Zikagesi Option 1
230V eyodwa sigaba / 120V wesigaba esinye
Input: Ground + line Hot + olungathath’icala
Isiphumo: + olungathath’icala line Hot + Ground
Zikagesi Option 2
120/24 0V Isigaba yahlula
Input: Ground + umgca Hot + umgca Hot
Isiphumo: line Hot + umgca Hot + olungathath’icala
Zikagesi Option 3
Input: Ground + umgca Hot + umgca Hot Isiphumo: line Hot + olungathath’icala
Bathi: Kwimeko enjalo, nganye 120Vac output yoncedo ntli kuphela max yesiqingatha Ubungakanani.
Kweentambo Option 2 kunye nokufakelwa Option 3 zivumelekile kuphela 110 / 220V imifuziselo zesigaba uphuphu .
Pls iingcingo zonke ezinye iimodeli ngokutsho eNgcingo Option 1.
Isilumkiso Njengezibonelo phase yahlula , AC igalelo cala ayifunelwa kweentambo. Ungaze Connect Igalelo olungathath’icala ukuya Ground okanye Isiphumo Maphakathi. Ukonakala w begula r awaziwa okungabandakanywanga phantsi kweziqinisekiso .
Imveliso ombane kule Uni t akamele lidibane igalelo AC terminal yayo, ukucima kombane okanye umonakalo kungabangela.
Soloko sw i sibhedlela kwi inverter phambi kokuba ama na isixhobo sombane.
Umonakalo owabangelwa AC iimpazamo kweentambo aniyi kuzigqubuthela phantsi kweziqinisekiso.
Ukuthintela sithatha i AC Isiphumo
I-AC yemveliso iyunithi akufuneki nanini na ukuba kuqhagamshelwa eluncedo amandla / generator.
Loo uxhulumaniso kungabangela ukusebenza engumzekelo ezahlukeneyo imithombo enamandla AC amandla avela eluncedo / wenkunkuma uya kufakwa umva kulo iyunithi eza nangoko umonakalo inverter kwaye kwakhona yingozi umlilo kunye nokhuseleko.
Ukudibanisa n AWG enkulu lobhedu gauge 8 okanye ucingo phakathi terminal isiseko phezu inverter kunye nenkqubo isiseko umhlaba okanye isithuthi isisu semoto.
3. 6 Ayanda le Inverter
Ukuze ukunyusa inverter ukholosile, t h e zomphandle kunye iintsimbi obandayo kufuneka ibe nakho ukuxhasa ubuncinane kabini ubunzima inverter. Ukudibana zolawulo ukhuseleko iimfuno, lo Series Sigineer Power APC mayixhonywe :
1: O na indawo oxwesileyo (ishelufu okanye kwetafile phezulu ) kunye icala top up ,
2: O na indawo nkqo ( njenge a eludongeni) kunye iiclamps DC ejongene ekhohlo kwaye ke fan axis horizonta l .
3: O na indawo nkqo ( njenge a eludongeni) kunye iiclamps DC zibheke ezantsi i d i fan umgca othe nkqo .
Isilumkiso! Don ‘ t ukunyusa inverter uyijongise ezantsi.
Umphezulu inverter unakho ukufumana kutsho kuma-80 ℃ (176 ℉ ) ngexesha lokusebenza, musa ukuchukumisa.
Le yunithi kufuneka zifakelwe ngoko ke ambalwa amathuba okuba kungena ukudibana nabantu.
Emva determinin g indawo obandayo, jonga kwimilinganiselo emzimbeni njengoko kubonisiwe ngezantsi mzobo s okanye sebenzisa isiseko inverter njenge template ukuphawula iindawo zakho Screw engathethekiyo. Emva ukumakisha iindawo obandayo esijijwayo, entabeni iyunithi kunye iintsimbi kwezimilo ezifanelekileyo.
Zokusombulula iqulathe ulwazi malunga nendlela troubleshoot iimeko impazamo kunokwenzeka xa usebenzisa i APC Inverter & Charger.
Le tshati ilandelayo yenzelwe ukukunceda ngokukhawuleza ukukhomba inverter iqhelekileyo f ailures.
Isalathisi and ibhaza
Isalathisi kuqweqwe phezulu LED ku Remote Tshintsha
isimo into Shore AMANDLA ON INVERTER ON CHG FAST edadayo CHG KUYO Temp UHAMBO KUYO Layisha UHAMBO Gesi ON BATT
CHG INVERTER alarm Ayanda
i-CV √ × √, blink × × × × √ × × ×
Dadisa √ × × √ × × × √ × × ×
Yima ecaleni kuka √ × × × × × × × × × ×
Indlela Inverter Inverter On × √ × × × × × × √ × ×
Umgcini mandla × × × × × × √ × × × ×
Indlela Inverter Ibhetri elisezantsi × √ × × × × × × √ √ Khalisa 0.5s zonke 5
Battery high × √ × × × × × × √ √ Khalisa 0.5s yonke 1
Indlela Invert sindisa × √ × × × √ × × √ √ Jonga ” alarm oluvakalayo “
Over-Temp Mode Buyisela × √ × × √ × × × √ √ Khalisa 0.5s yonke 1
Indlela Line Over-Temp √ × √ × √ × × √ × √ Khalisa 0.5s yonke 1
phezu Charge √ × √ × × × × √ × √ Khalisa 0.5s yonke 1
akube fan Lock × × × × × × × × × × Khalisa okuqhubekayo
battery High × √ × × × × × × √ × Khalisa okuqhubekayo
Invert sindisa Mode × × × × × √ × × × × Khalisa okuqhubekayo
imveliso Short × × × × × √ × × × √ Khalisa okuqhubekayo
Over-Temp × × × × √ × × × × × Khalisa okuqhubekayo
phezu Charge × × √ × × × × √ × × Khalisa okuqhubekayo
Buyela Yalusa Short × × × × × × × × × × Khalisa okuqhubekayo
uphawu Cause kunokwenzeka Solution okunikezelwe
Inverter akayi bukele ngexesha lokuqala amandla up. Iibhetri na uxhulumanisa, evakalala uqhagamshelo ibhetri-icala.
ombane ibhetri iphantsi. Qwalasela amabhetri kunye cable unxulumano. Khangela DC fuse kunye ndingumgqithi.
Akukho AC imveliso ombane kwaye akukho salathisi izibane ON. Inverter uye ngesandla iguqulelwe imo OFF. Cinezela i switsha kwi khusi Power ngomhla okanye mbane ngaphandle sikhundla .
AC imveliso ombane luphantsi kwaye inverter ujika imithwalo OFF ngexeshana elifutshane . Ibhetri elisezantsi. Qwalasela imeko iibhetri uze uyitshaje kwakhona ukuba kunokwenzeka.
Charger ongasebenziyo kwaye iyunithi iza akayi kwamkela AC. AC ombane liye lehla
out-of-ukunyamezelana Qwalasela ombane AC for olufanelekileyo ombane kunye rhoqo .
Itshaja uya kunibonelela ngentlawulo asezantsi rate. ulawulo Charger zisuke abekwe.
Kwanegalelo ombane AC .
Ibhetri ezikhululekileyo okanye igalelo AC imidibaniso. Jonga icandelo ku lungisa i “Charger Rate”.
Umthombo wakufanelekela AC ngamandla.
Khangela zonke DC / uqhagamshelwano AC.
Itshaja iyavalwa xa zibiza ukusuka wenkunkuma. AC igalelo High yombane evela wenkunkuma. Layisha le generator phantsi kunye nomthwalo onzima.
Tyhila ombane generator output phantsi.
Imithwalo ezibuthathaka ukucima okwethutyana xa betshintsha phakathi kwigridi ze inverting. Inverter kaThixo Low uhambo ombane ombane abe sezantsi kakhulu ukugcina imithwalo ethile. Khetha emxinwa ombane AC kwi iswitshi DIP, okanye Faka i UPS ukuba kunokwenzeka.
Ingxolo evela transformer / case * Ukusebenzisa imithwalo ezithile ezifana woma iinwele Susa imithwalo
* Isizathu sokuba ingxolo evela sombane kunye / okanye icala
Xa ukwimo inverter kunye sombane kunye / okanye kwimeko le inverter maxa wambi ukuze nendlebe kwaye wenze ingxolo.
Ukuba ingxolo uvela sombane.
Ngokutsho iimpawu inverter wethu, kukho olunye uhlobo lomthwalo leyo eya kubangela ukuba rattles of transformer.
Loo nto a enesiqingatha – umthwalo wave, umthwalo ukuba usebenzisa kuphela nje ngomjikelo sisiqingatha ngamandla (khangela Umfanekiso 1) . Oku ezenzeka ukuba ukungalingani otsalayo intsimi ye sombane, ukunciphisa yayo rated lvul ukusebenza ukususela 20K H z ukuba, nithi, mhlawumbi 15KHz (it ezahlukahlukeneyo kuxhomekeka imithwalo ezahlukeneyo) . Le ndlela, lo lvul kwengxolo uwa ngokuchanekileyo kwi ukuya kuluhlu (200Hz-20K H z) ukuba abantu indlebe uyakwazi ukubona .
Umthwalo iqhelekileyo uhlobo olunjalo woma iinwele.
Ukuba ingxolo ivela icala .
Ngokuqhelekileyo xa zithwele imithwalo zokuqala, i- magnetic intsimi eyenziwe sombane ugcina umdla uku- okanye releas ba i intsimbi kwimeko kwiziko lvul ethile, oku kungenzeka kwakhona ik___pusi u se ingxolo.
Ukunciphisa amandla umthwalo okanye usebenzisa i inverter kunye umthamo omkhulu ngokwesiqhelo ukusombulula le ngxaki.
Ingxolo willn ‘ t ukwenza nawuphi na umonakalo ukuya inverter okanye imithwalo.
Thina unika le mveliso nxamnye iziphene zokwakha nokusetyenzwa ixesha omnye ngonyaka ukususela ngomhla ekuthengwe ngawo aze alungise okanye indawo nayiphi ezineziphene APC Inverter xa wabuyela ngqo, ukuposa ohlawulelwa, ukuba umenzi. Le waranti ziya kuqwalaselwa engento ukuba iyunithi iye ubunzima nawuphi na umonakalo ezicacileyo emzimbeni okanye ukuguqulwa nokuba ngaphakathi okanye ngaphandle kwaye ayiquki umonakalo evela ukusetyenziswa ngokungafanelekanga ezifana wokufaka iyunithi ibe imithombo yamandla ezingafanelekanga, ukuzama ukusebenza iimveliso kunye neemfuno power ngokugqithiseleyo , ukubuyisela wokwephuka, okanye sebenzisa kwindawo ezingafanelekanga.
Waranti ayibandakanyi babandakanye abasebenzi, IMIRHUMO ZOKUHAMBA, okanye naziphi na ezinye iindleko ezenziweyo ukulungiselela UKULUNGISWA, UKUSUSWA, ZOFAKELO, ukusisevisa, zokufumanis OKANYE UKUSINGATHWA nokuba NGAMACANDELO ezineziphene okanye NGAMACANDELO EZITHATHA. THE WARRANTOR ayithathi sezomthetho NOMA naluphi na uhlobo.
Ngelahleko okanye ngomonakalo: Ilahleko okanye umonakalo ethunyelwayo luxanduva yenethiwekhi. Naliphi na ibango kufuneka efayilini kunye nenkampani zothutho yokukhulula. Invoyisi, Bill of kungekwamthwalo namkhombe irisithi Delivery nomonakalo kuqatshelwe kulo kufuneka ihambe kumabango ukonakala kwempahla. Amabango yokunqongophala kunye okuzo ezilahlekileyo kufuneka senziwe ngembalelwano le owakungqina- kwisithuba -3 iintsuku zokufumaneka of ukuthunyelwa. Amabango akuxelwa phakathi kwesi sakhelo xesha akuyi uyazukiswa.
Le waranti awusebenzi kwaye siza kuba asiyi uxanduva ngaso nasiphi na isiphene okanye umonakalo:
a) imveliso ukuba sele kabi, elahliwe, singafakwanga kakuhle, zonakaliswe ngokwasemzimbeni okanye etshintshiweyo, okanye
ngaphakathi okanye ngaphandle, okanye zonakaliswe ukusuka ukusetyenziswa ngokungafanelekanga okanye ukusetyenziswa kwindawo engafanelekanga; ukunyhashwa izilumkiso kule ncwadana iya semthethweni isiqinisekiso.
b) imveliso ukuba sele iye phantsi emlilweni, amanzi, umhlwa nolahlo ngokubanzi, zintwala zebhayoloji, okanye ombane igalelo ukuba kudala iimeko yokusebenza ngaphaya kwemida ubuninzi okanye ubuncinane kuluhlu imveliso iinkcukacha kuquka ombane igalelo ephakamileyo umbane kunye uqhankqalazo umbane;
c) imveliso xa ulungiso eyenziwayo ukuze kube ngaphandle inkampani yethu okanye Centres inkonzo yayo egunyazisiweyo yom-;
※ Iimpazamo kunye nokungenzi reserved. S pecifications kule ncwadana ezi ndaba ukutshintsha ngaphandle kokuba isaziso.
UMNXEBA: +86 755 2160 7078
IFAKSI: 755 +86 6165 8278
Dibanisa: Bld A, Jiali Industrial Zone, Yuanfen Rd, Longhua, Shenzhen, 518100, China
GCINA LE NCWADI !
FUNDA LE NCWADI PHAMBI UFAKELO, OKO IQULETHE UKHUSELEKO, KUBALULEKILE UFAKELO KUNYE YOKUSEBENZA IMIYALELO. YIGCINE KWINDAWO EKHUSELEKILEYO UKULUNGISELELA UKUBA ISETYENZISWE KWIXESHA ELIZAYO .
SININQWENELELA AMAVA BEMNANDI KUSETYENZISWA INVERTERS ZETHU.
(PN: 614-01 66 6-04 / UPDATED KWI UJAN 2015)
Very good contact person Franklin Chu
Jose S Gonzalez Nov 26, 2020